ညီမလေး အမျိုးသားအကြောင်းပြောပြမယ်.. နားထောင်မလား လို့မေးလာတဲ့ သူငယ်ချင်း မမွန်ရဲ့ စကားကို ရင်ခုန်မိနေတယ်။
အပူရှိန်အပြင်းဆုံးရင်ခုန်ခြင်းတွေ ကျွန်မ ဆီရောက်ရှိခဲ့တာ နှစ်အတော်တောင်ကြာခဲ့ပီပဲ။
စာဖတ်နေတဲ့ ယူ့ကို ပြောရမှာသနားပေမယ့် ယူ့လူကြီးကို တို့ ဘန်ကောက်မှာတွေ့ခဲ့တယ်။
ဟိုဆိုင်က အမျိုးသမီးနဲ့ ။
တူတူတွေ့ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကတော့ ယူစာဖတ်နေတာ အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေချင်လို့ ပြန်မပြောရဘူးလို့ ကတိတွေပေးထားကြပေမယ့်... နောက်ကျသွားမှာဆိုးလို..့ ငါ့ညီမရယ်လို့ earphone ထဲကနေပြောနေတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ကျေးဇူးပဲ တင်ရမလို..
တဆက်တည်း အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုအတွက် ကျွန်မ ရှက်ရွံ့သွားသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဆောက်တည်ရာမရတဲ့ စိတ်နဲ့အတူ လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ swarovski ဘောပင်ကို ချိုးဖဲ့ပြစ်လိုက်ခြင်လာတယ်။
လေယဉ်စီးတဲ့အခါတိုင်း ပါလာတတ်တဲ့ နာရီလေးတွေ တန်းစီချိတ်ထားတဲ့ သစ်သားဘောင်ကားချပ်ကို ပြတင်းပေါက်ကနေ နှင်းတောထဲကို လွင့်ပစ်လိုက်ချင်လာတယ်။
ယူ့ကို ယူ့လူချစ်တာတော့ တို့တွေအကုန်လုံးသိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဟိုမိန်းမလည်း မျက်နှာပြောင်လိုက်တာကွာ မသိကြတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ပဲ။
သတိတော့ထားပေါ့ နော် … ...
ကျွန်မထိုညက အိပ်မပျော်တော့ ။ အိပ်မပျော်သောရက်တွေ ဆက်နေတာများပါပြီ။
မေမေ ရထားကြီးဘယ်လောက်စီးရမှာလည်းဟင်။ အင်း ဒီကနေဆို ၃ ဘူတာရပ်မယ်။ ဒါပေမယ့် အကြာကြီးတော့ စီးရမယ် မီးငယ်လေး လို့ဖြေရင်း ကျွန်မလိုပဲ ပါးလွာတဲ့ ဆံပင်ရှိတဲ့ သမီးငယ်ရဲ့ ခေါင်းကိုညင်သာစွာပွတ်ပေးရင်း မနက်ဖြန် စင်္ကပူကို သားအမိနှစ်ယောက်တည်း ပထမဆုံးအကြိမ်ထွက်ကြမယ့်ခရီးအတွက် သမီးငယ်အတွက်လိုအပ်မယ်ထင်တာတွေ ကြိုဝယ်ဖို့ တွေးနေမိတယ်။
ကို တစ်ရက်ကြိုရောက်မယ် လို့ပြောလာတော့ ကျွန်မ စိတ်တိုစွာနဲ့ ဘာလို့တစ်ရက်စောရောက်ရမှာလည်း
အတူတူရောက်ကြလည်းရရဲ့သားနဲ့ လို့ကျွန်မစိတ်မရှည်သလိုပြောမိတော့ ငြိမ်သက်သွားတာတော့
လေယဉ်ပေါ်မှာလည်း သမီးငယ်သိပ်မအိပ်။ဟိုတယ်ရောက်တော့လည်း ဖေဖေ့ကိုစောင့်မှာဆိုပီး connection room ဘက်ပြေးလိုက် ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်ပြေးလိုက်နဲ့ သမီးငယ်။ ကျွန်မ အကြံအစည်တွေကို ခလေးနားလည်ဖို့က သိပ်ကို စောလွန်းသည်ကိုး။
အား…ကြာ ပါတယ်။ လေဆိပ်မှာသွားစောင့်မယ် ။ ဟုတ်တယ်.. တရက်စောရောက်မယ်ပြောပြီး ကျွန်မတို့လေယဉ်ပေါ်တတ်ခါနီးမှ သူနောက်ကျမယ်ပြောတာလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ခုလည်း ညနေလေယဉ်နဲ့မှရောက်မယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ နေ့လည် Flight မသေချာဘူးလို့ပဲ ဘူးပြောနေတဲ့ သူ ခုသွားကြည့် ရင် ကျွန်မ မှီနိုင်တယ်။
ဟုတ်တယ် ငါ..ခလေးကိုယ် ဟိုတယ်ရဲ့ child play room မှာထားခဲ့မယ်။ ငါသွားမယ်။
တစ်ခါတည်း ဖွင့်မေးပီး ကျွန်မဘယ်လိုရန်တွေ့မလည်း။ မျက်နှာကို ကုတ်ခြစ်ပလိုက်ရမလား။ အိတ်တွေကို ထိုးခွဲ လိုက်ရမလား ။ရေချိုးခန်းထဲမှာ ရေပန်းအရင်ဖွင့် တီဗီဖွင့်ပီး အော်ဟစ်ပလိုက်ရမလား။ သူ့အတွက်ပါလာတဲ့ ဂေါက်အိတ်ကို သူ့ရှေ့မှာတင် ကျွန်မလက်သည်းနီတွေ မှောက်လိုက်ရမလား ။ မနက်ဖြန်ပြန်ဖို့ လေကြောင်းလိုင်းကို သူ့ ရှေ့မှာ ဘိုကင်ပြောင်းမလား။ သမီးငယ်နဲ့သူ့ကို ထားပီးကျွန်မ ထွက်သွားမလား။ သမီးငယ်ကို အကုန်ရှင်းပြမလား ……………..
လေဆိပ်အ၀ကနေ ပြုံးရွင်စွာထွက်လာပီး အိတ်ကို ကူသယ်ပေးနေတဲ့ ထိုမိန်းမရဲ့ မျက်နှာ. တတွတ်တွတ်ပြုံးရွင်စွာပြောလိုက် အိမ်ကလူကို တွန်းလိုက် စိတ်ဆိုးတဲ့ပုံလုပ်လိုက်နဲ့ ထိုအမျိုးသမီးမျက်နှာက ကျွန်မထက် အသက် ၉ နှစ်နီးပါးကွာခြားတယ်ဆိုတာ ဘုရားစူး။
ကြည့်စမ်း ကျွန်မနဲ့ချိန်းထားတဲ့နေရာကို လိုက်လာရဲပီး ကျွန်မပြန်မှ သူတို့ဒီမှာ ဘာဇာတ်ခင်းကြမလည်း ကျွန်မ သွေးတွေတပွက်ပွက်ဆူလာပီး လေဆိပ်လုံခြုံရေးရှိမရှိ သတိကြီးစွာကြည့်လိုက်တယ်။
မရတော့.. လုံးဝမရတော့....ကျွန်မရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ မျက်မှန်ဘူးကို ရုတ်တရက်ဆွဲထုတ်ပီး သူ့တို့ဆီ အပြေးသွားပီး မျက်မှန်ဘူးနဲ့ ထိုအမျိုးသမီးမျက်နှာကို ပေါက်လိုက်ပေမယ့် တုန်ရီနေတဲ့လက်တွေကြောင့် ထိုအမျိုးသမီးရဲ့ ရင်ဘက်ပေါ်ကို သာမှန်သွားတယ်။ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ မဖြစ်လာခင် ငါ ထပ်လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်တာနဲ့ လက်ကဖုန်းကိုပါဆွဲထုတ်ပီး အိမ်ကလူ မျက်နှာကို ရွယ်လိုက်တယ်။ မှင်သက်မှိနေကြရာကနေ အသက်ဝင်လာကြတဲ့ပုံစံနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် ...
မေ. မင်းဘာလုပ်တာလည်းတော်စမ်း။ မင်း မလုပ်နဲ့ ကိုယ်တောင်းပန်တယ်။ ကိုယ်တာဝန်ယူပါတယ်။
ကိုယ်ရှင်းပါ့မယ်လို့ တတွတ်တွတ်ပြောနေတဲ့ သူ့ကို ကျွန်မ အမုန်းတရားများစွာနဲ့ ကြည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်မကြောက်တယ်။ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ ၇ှုံးနိမ့်မှာ ကျွန်မကြောက်တယ်။
ခံပြင်းမှု့. ရှက်ရွံမှု့ .. နာကျည်းမှု့ များနှင့်အတူ ကျွန်မပါးစပ်ကထွက်လာတာတွေ က
ဘာ..လူကြီးတွေလည်း ...ရှင်လည်းအရှက်မရှိ... သတိမရှိဘူး လို့ သူမျက်နှာကို ကြည့်ရင်းအော်မိသလို
အထင်သေးစွာ.... မုန်းတီးစွာ... ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ ပြောလိုက်ချင်တဲ့ စိတ်တို့နဲ့အတူ
ဟဲ့.. ဒီမှာ ..ငါအကောင်းကြီးရှိသေးတယ် ။ နင်ကြောင်တောင်မနှိုက်နဲ့။ သောက်ရှက်မရှိတဲ့ မိန်းမ
နင် ရွစရာလူ အဲ့လောက်ရှားလား ။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဆိုလည်း ထားပါတော့ ...
လေဆိပ်ကထွက်လာတဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့တအားကို ကွာခြားသွားသော ထိုအမျိုးသမီးရဲ့ မျက်နှာမှာ လူမိသွားတဲ့ကြောက်ရွံမှု့တွေအပြည့်။
တွေ့မယ် နင့်အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ငါလာခဲ့မယ်။ နင် လည်း အရှက်ကွဲစေရမယ်။
ရောင်းနေတော့ မြင့်မြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ရတနာ လုပ်နေတဲ့အလုပ်က အောက်တန်းစားအလုပ် ဆိုပီးမရပ်မနားကျွန်မပြောနေမိတယ်။
ကျွန်မနားကို ရဲတွေရောက်လာပီး ကျွန်မရဲ့ အိတ်ကနေ စဆွဲပါတော့တယ်။
Mam.. Mam.. please ..follow us ဆိုပီးပြောလာတဲ့အခါမှာတာ့ ကျွန်မ ငိုကြွေးမိလိုက်ပါတော့တယ်။
မေမေ . မေမေ . မေမေ..မေမေ..မေမေ
မျက်ရည်လည်ရွဲနဲ့ ကျွန်မကို ကြည့်ပီး သမီးငယ်ကပါမျက်ရည်ဝဲလာတယ်။
ရင်ခွင်ထဲဆွဲ သွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ ကျွန်မအိပ်မက်ကို ကြောက်ရွံလိုက်တာ။ ကိုယ်နှုတ်အမှုရာတွေ ကြမ်းတမ်းလိုက်တဲ့ကျွန်မ။
သမီးငယ်ကို ညစာအဖြစ်ခေါက်ဆွဲဗူးလေး ပြုတ်ကျွေးလိုက်တယ်။ ဆောရီးသမီးရယ် အပြင်ထွက်ဖို့ မေမေ့မှာ ခွန်အားတွေမရှိဘူး။ နံရံအပြည့် မှန်တွေထဲမှာ ပေါ်နေတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်
ဟုတ်တယ်.. ကျွန်မ မနူးညံ့ဘူး။
ဟုတ်တယ်... ကျွန်မ မာကျောတယ်။
ကျွန်မ ခွန်အားတွေ ယူနေရပါပြီ။
တခါးခေါက်သံအဆုံး ကျွန်မအသက်ကို ပြင်းပြင်းရှုလိုက်တယ်။
ကျွန်မတို့သားအမိကို ကြုံးဖက်လိုက်တဲ့ သူ့ကို ကျွန်မ ကြောက်ရွံနေတယ်။ အလိုက်သင့်ပြန်ဖက်ရင်း သူ့ကုတ်အင်္ကျီထဲလက်နှိုက်မိနေတယ်။ boarding pass နဲ့ဗူးလေးတစ်ဗူး......
အခုညနေမှစီးလာတဲ့ ထိုင်ခုံလက်မှတ်တစ်ခု..baggage tag တစ်ခု ၊ ဗူးလေးကို လက်မနဲ့ကော်ပီးသူ့နောက်ကျောကနေ ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်မလက်သည်း ခွံလောက် တဖျတ်ဖျတ် လက်နေတဲ့ အရာနှစ်ခု …
ချစ်တဲ့ မေအတွက် happy anniversary…………….
ကို…ကျွန်မ ဒီအလုပ်တွေ စိတ်မ၀င်စားဘူးနော် ကျွန်မ ပြန်ရင်လည်းအဲ့ အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဗူးလေးကို သူ့ကုတ်အင်္ကျီထဲပြန်ထည့်ပီး ပြောလိုက်တယ်။
ကျွန်မကို တည့်တည့်ကြည့်ပီး ပြုံးရွှင်စွာနဲ့ သူခေါင်းညိတ်တယ်။ မင်းလည်းဒါပီးရင် ကျောင်းဆက်မတတ်နဲ့တော့ ကိုယ်အဆင်မပြေတော့ဘူး နေရတာ။
ကျွန်မလေ သိပ်ကို ပျော့ညံ့လွန်းသူပါ။
နောက်ထပ်အိမ်မက်တွေတော့မမက်တော့ ဘူးလို့ ကဲ ဘယ်သူပြောနိုင်မလည်း...............
Posted by ကြည်ကြည် at 6:13 AM 8 comments:
asobou te iu to
asobou te iu
bakatte iu to
mouasoba nai te iu to
asobanai te iu
soshite atode sabishiku natte
gomen ne te iu to
gomen ne te iu
iie , daredemo
တော်ပီ မကစားတော့ဘူး ပြောတော့
မကြာခင် အထီးကျန် ဆန်လာသလိုဖြစ်တော့
ရေးသူက ဂျပန်အမျိုးသမီး ကဗျာဆရာမ သီချင်းရေးသူ kaneko Misuzu (1903-1930) က ရေးတဲ့စာကို ထုတ်ဝေသူ ဂျပန်လူမျိုး Mr. Yasaki Setsuo ကနေ အောက်ပါအတိုင်းပြန်ပီးရေးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ပဲ့တင်သံရဲ့ခေတ်တစ်ခုမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ကြပါဖူးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်က နာတော့ပေါ့ နာလိုက်တာလို့ ပဲ့တင်သံပြန်လာပေးကြပေမယ့်
နာလိုက်တာလို့ ဆိုလာတဲ့ စကား ကို မနာပါဘူး လို့ ပြန်ပြောခံရပါတယ်။
တစ်ကယ်တော့ နာလိုက်တာ လို့ ပြောလိုက်လို့ နာလိုက်တာလို့ ပြန်ပီး ပဲ့တင်သံကြောင့် ကျွန်တော် တို့ရဲ့နာကျင်ချင်းတစ်ဝက်ကို ခွဲပေးရလိုက်လို့ ပေါ့ပါးသွားတဲ့အရာနဲ့
ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ပဲ့တင်သံမရှိတဲ့အခါမှာတော့ နာကျင်မှု့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကျွန်တော် တို့ပဲ ခံစားပီး
မျှဝေမခံစားပေးတဲ့ ပဲံ့တင်သံမရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု အဖြစ်ပြောင်းလည်းလာနေတာတော့ အမှန်ပဲ မဟုတ်လား .။
ချစ်သူနဲ့ ကွဲလို့ ခံစားနေရတဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ကျွန်မ သူနဲ့ အတူဝင်ပီး ခံစားပေးလိုက်တယ်။
သူငိုသလို ငိုတယ်။ သူဒေါသထွက်သလို ထွက်ပေးလိုက်တော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်း ခံစားမှု့တွေ ပေါ့ပါးလာတာကို တွေ့ရတယ်။
အဲ့အချိန်မှာသာ သူ့ကို ခံစားမနေစမ်းပါနဲ့ ဟာ သူကြင်မှ ကိုယ်ကြင်ပေါ့လို့ပြောလိုက်ရင် ခံစားနေတဲ့သူမ ဟာ
ကျွန်မစကားတစ်ခွန်းကြောင့် အားတင်းသွားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကွယ်။ အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ ပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် အနီးစပ်ဆုံးကျွန်မကို ရှက်ရွံအားနာတာနဲ့ သူဘာသာသူ သပ်သပ်တိုးတိတ်စွာ ထပ်ခံစားနေမှာကို မလိုလားမိလို့ပါပဲ။
Posted by ကြည်ကြည် at 1:13 AM4comments: